Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Lyme Disease (Lyme ရောဂါ)
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Lyme ရောဂါဟာ Borrelia burgdorferi ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့ (ခြေထောက်အမည်းရောင်ရှိတဲ့) မွှားကိုက်ခံရတာကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မွှားကိုက်ခံရပြီး သုံးရက်ကနေ ရက်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ကူးစက်ရောဂါအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး လက္ခဏာအမျိုးမျိုး ပြလာနိုင်ပါတယ်။
မွှားကိုက်ခံရခြင်းကြောင့် Lyme ရောဂါ ရမရဆိုတာကတော့ မွှားအမျိုးအစား၊မွှားကိုက်ခံရတဲ့ နေရာဒေသ၊ခန္ဓါကိုယ်မှာ မွှားတွယ်နေတဲ့ အချိန်ပမာဏ စတာတွေအပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်လို့ စီဒီစီ (ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန)ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါတယ်။Lyme ရောဂါဖြစ်ဖို့ဆိုရင် မွှားဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ အနည်းဆုံး ၂၄နာရီ ကပ်တွယ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန (စီဒီစီ)အထိ ရောက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ တနှစ်တနှစ်ကို Lyme ရောဂါဖြစ်ပွားသူ သုံးသောင်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတာဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားတဲ့သူအရေအတွက်ရဲ့ လက်တဆုပ်စာမျှသာဖြစ်ပြီး စီဒီစီရဲ့ နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်များအရ တနှစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား သုံးသိန်းကျော်ဟာ မွှားကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေကို ခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Lyme ရောဂါရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
မျက်နှာကြွက်သားများ အကြောသေပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ခြင်း။
အချို့လူနာတွေမှာ Lyme ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်။
အနီစက်တွေ ထွက်လာတာဟာ သင်မွှားကိုက်ခံရကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီး ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင် ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသကောင်းကုသနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Borrelia burgdorferi နဲ့ Borrelia mayonii ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် Lyme ဖြစ်ပွားရပြီး အဆိုပါ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သယ်ဆောင်လာတာကတော့ (ခြေထောက်အမည်းရောင်ရှိတဲ့) မွှားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမွှားတွေဟာ အညိုရောင်ရှိပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာ ဘိန်းစေ့အရွယ်သာသာလေးပဲ ရှိတတ်တဲ့အတွက် သာမန်မျက်စိနဲ့ မြင်ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
Lyme ရောဂါ ကူးစက်ခံရဖို့ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားပိုးသယ်ဆောင်ထားတဲ့ မွှားကိုက်ခံရဖို့ ကျိန်းသေပေါက် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ မွှားကိုက်တဲ့နေရာကတဆင့် အရေပြားကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ သွေးကြောထဲ ရောက်ရှိသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Lyme ရောဂါ ကူးစက်ခံရဖို့ဆိုရင် မွှားကောင်ဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ၃၆နာရီကနေ ၄၈နာရီထိ တွယ်ကပ်နေရပါမယ်။
သင့်ကိုယ်မှာတွယ်နေတဲ့ မွှားဟာ ဖောင်းကားနေပြီဆိုရင်တော့ တွယ်နေတာ အတော်ကြာပြီဖြစ်လို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကို သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲ ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေပြီးသား ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မွှားကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကို ကာကွယ်ကောင်းကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Lyme ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
တောအုပ်ထဲ ဒါမှမဟုတ် ချုံနွယ်မြက်ခင်းထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေခြင်း။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတွေဟာ ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ တောအုပ်အရမ်းထူထပ်တဲ့အတွက် အဆိုပါ ဒေသတွေမှာ မွှားတွေ အများဆုံး နေထိုင်ကျက်စားကြပြီး အိမ်ပြင်ဖက်မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆော့ကစားလေ့ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရှိနေပါတယ်။ အဆောက်အဦးပြင်ပမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားလှပါတယ်။
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မွှားကောင်တွေဟာ (Lyme ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကို အဓိက သယ်ဆောင်သော) ကြွက်နဲ့ အခြားတွင်းအောင်းသတ္တဝါတွေပေါ်မှာ ကပ်ပါးနေထိုင်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသား မွှားကောင်တွေကတော့ အမြီးဖြူသမင်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ပေါ်မှာ အဓိက တွယ်ကပ်နေထိုင်ပါတယ်။
အရေပြားနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း။ မွှားတွေဟာ အကာအရံမရှိတဲ့ အသားပေါ်ကို အလွယ်တကူ တွယ်ကပ်နိုင်တာကြောင့် မွှားပေါတဲ့နေရာဒေသတွေကို သွားရောက်မယ်ဆိုရင် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော၊သင့်ကလေးတွေအတွက်ပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မွေးတိရ စ္ဆာန်လေးတွေကို ခပ်ရှည်ရှည်မြက်တွေ၊ခြုံတွေနား မသွားခိုင်းပါနဲ့။
မွှားကောင်ကို အမြန်မဖယ်ခြင်း၊သေချာစွာ မဖယ်ရှားမိခြင်း။ မွှားကောင်တွေဟာ သင့်အရေပြားပေါ်မှာ ၃၆နာရီမှ ၄၈ နာရီ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး တွယ်ကပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ မွှားကိုက်ရာကနေတဆင့် သင့်သွေးကြောထဲ ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ မွှားကို နှစ်ရက်အတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Lyme ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို နည်းသွားစေပါလိမ့်မယ်။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာတွေရယ်၊မွှားတွယ်ခံရတဲ့ ရောဂါရာဇဝင်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး Lyme ရောဂါကို အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ စီဒီစီရဲ့ အလိုအရတော့ အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်တဲ့ သွေးစစ်မှုဟာ (မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရင်) တော်တော်လေး အသုံးဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစစ်ဆေးမှု မှန်ကန်တိကျမှုရှိမရှိဆိုတဲ့အချက်ဟာ ရောဂါအဆင့်ပေါ် မူတည်နေပါတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးကို ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ ရက်သတ္တပတ်တွေနဲ့ ချီပြီး ကြာမြင့်နိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သွေးစစ်ရင် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး(negative ဖြစ်နေမှာပါ)။ ဒါကြောင့် Lyme ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေ မပြတဲ့ လူနာတွေကိုတော့ သွေးဖောက်စစ်ဆေးခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
Lyme Disease (Lyme ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Lyme ရောဂါကို ကုသဖို့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စောစောကုသလေ ရောဂါမြန်မြန်ပျောက်ကင်းလေ၊အမြစ်ပြတ်လေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သောက်ဆေး : Lyme ရောဂါ ဖြစ်ကာစ အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ကုသဖို့အတွက် အဓိကအသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ အသက်ရှစ်နှစ်အထက် ကလေးတွေအတွက် doxycycline ၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေ၊ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်/နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် amoxicillin သို့မဟုတ် cefuroxime တို့ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၄ရက်ကနေ ၂၁ရက် ကာလအထိ သောက်ဖို့ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်ကြားလေ့ရှိပေမယ့် ၁၀ရက်ကနေ ၁၄ရက်အထိသာ သောက်ရတဲ့ ပုံစံတွေဟာလည်း အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုအချို့အရ သိရှိရပါတယ်။
အကြောသွင်းဆေး : တကယ်လို့ Lyme ရောဂါဟာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောစနစ်ကိုပါ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ အကြောသွင်းဆေးပုံစံ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးပြုပြီး ၁၄ရက်ကနေ ၂၈ရက်တိုင်တိုင် ကုသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ကုသမယ်ဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာပျောက်ကင်းသွားဖို့ အချိန်အနည်းငယ် ယူရတယ်ဆိုပေမယ့် ကူးစက်ပိုးတွေကိုတော့ ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားသုတ်သင်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောသွင်းဆေးပုံစံ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးဟာ သွေးဖြူဥပမာဏ လျော့ကျစေခြင်း၊(သာမန် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ) ဝမ်းလျှောခြင်း၊ပိုးသတ်ဆေးမတိုးသော (Lyme ရောဂါနဲ့ မဆိုင်တဲ့) ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကူးစက်ခံရခြင်း စတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်သော လူနာတွေဟာ ကုသမှုခံယူပြီးချိန်မှာတောင် (ကြွက်သားနာခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း အစရှိတဲ့) ရောဂါလက္ခဏာအချို့ကို ဆက်လက်ခံစားရနိုင်ပြီး ဒါမျိုးကို Lyme ရောဂါ ကုသပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော လက္ခဏာပေါင်းစုလို့ခေါ်ကာ အကြောင်းရင်းကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်လာရင် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ ထပ်ကုလို့လည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ အချို့သော Lyme ရောဂါရှင်တွေမှာ autoimmune လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါခုခံအားစနစ် မူမမှန်တက်ကြွအလုပ်လုပ်ခြင်း အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ဒီလိုမျိုး လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတာလို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အချို့က သုံးသပ်ပေမယ့် အတိအကျ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သုတေသနတွေ ဆက်လက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
Lyme ရောဂါကို ကုသဖို့အတွက် အချို့သော တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်တွေ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Bismacine ထိုးဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးစီမံကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ရေး (FDA)ကတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို ဆန့်ကျင်သတိပေးထားပါတယ်။chromacine လို့လည်း ခေါ်တဲ့ Bismacine ဆေးမှာ bismuth သတ္တုဓါတ်ပမာဏ မြင့်မားစွာ ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ အစာအိမ်အနာကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အချို့သော သောက်ဆေးတွေမှာ bismuth ပါဝင်နေသည့်တိုင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် bismuth ကို ထိုးဆေးပုံစံ ဒါမှမဟုတ် Lyme ရောဂါကို ကုသဖို့အတွက် မသုံးစွဲရပါဘူး။Bismacine ဟာ bismuth အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Lyme ရောဂါကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Lyme ရောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံစွာ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း : တောအုပ်ထူထပ်တဲ့နေရာ ဒါမှမဟုတ် မြက်တောထဲ သွားတဲ့အခါ ရှူးဖိနပ်စီးခြင်း၊ဘောင်းဘီရှည်ကို ခြေစွပ်ထဲထိဝင်အောင် ထိုးထည့်ပြီးဝတ်ခြင်း၊အင်္ကျီလက်ရှည်ဝတ်ခြင်း၊ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း၊လက်အိတ်စွပ်ခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ရပါမယ်။ လူအသွားအလာလုပ်နေကျ လမ်းအတိုင်း လိုက်သင့်ပြီး ခြုံပုတ်နိမ့်နိမ့်လေးတွေ ဒါမှမဟုတ် မြက်ရှည်တဲ့ နေရာတွေကို နင်းလျှောက်ခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ သင့်ခွေးကို လည်ပတ်ပတ်ပြီပေးထားပြီး ကြိုးနဲ့ဆွဲထားပါ။
ပိုးမွှားတွယ်ကပ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် ဆေးဝါးများ အသုံးပြုခြင်း : ၂၀% ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပြင်းအားပိုများတဲ့ DEET ကို သင့်အရေပြားမှာ လိမ်းပေးပါ။ ကလေးတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့အခါ သူတို့လေးတွေရဲ့ လက်၊မျက်လုံးနဲ့ ပါးစပ်တွေကို မလိမ်းမိအောင် မိဘတွေက ဂရုတစိုက်ရှိရပါမယ်။ အဆိုပါ ဆေးဝါးတွေဟာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရပါမယ်။DEET ကို အဝတ်အစားတွေမှာ လိမ်းကျံပေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးစိမ်ပြီးသား အဝတ်အစားတွေကို ဝယ်ယူခြင်း စတာတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်ခြံဝန်းထဲမှာ ဘာမွှားကောင်မှ ရှိမနေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ မွှားတွေ ကျက်စားတတ်တဲ့ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေ၊သစ်ရွက်တွေကို ရှင်းလင်းပါ။ ထင်းပုံတွေ၊သစ်သားပုံတွေကို နေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့ နေရာမှာ ထားပါ။။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်၊သင့်ကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ အိမ်မွေးတိရ စ္ဆာန်တွေမှာ မွှားတွယ်ကပ်နေခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ တောအုပ်ထဲ ဒါမှမဟုတ် မြက်ခင်းထူတဲ့နေရာတွေမှာ နေထိုင်သွားလာပြီးနောက် ပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့ ပိုက်စိပ်တိုက်ရှာပါ။ စစ်ဆေးပါ။ မွှားကောင်တွေဟာ အပ်နဖားပေါက်အရွယ်လောက်တောင် ကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အသေအချာ စစ်ဆေးမှသာ သူတို့ကို ရှာတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထဲပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ရေချိုးရင်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မွှားတွေဟာ တွယ်ချိတ်ခြင်းမပြုမီ အရေပြားပေါ်မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် ရေချိုးလိုက်ခြင်း၊လျှော်ဖွပ်ပြီးသား အဝတ်သန့်သန့်တွေကို ဝတ်ဆင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မတွယ်ချိတ်ရသေးတဲ့ မွှားတွေကို ကူညီဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။
Lyme ရောဂါဟာ တခါဖြစ်ပြီးရင်လည်း နောက်တခါ ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတာမို့ မပေါ့သင့်ပါဘူး။ မွှားတွေကို ဇာဂနာအသုံးပြုပြီး တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ မွှားကို လက်နဲ့ ညှစ်ချေပစ်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ ၎င်းရဲ့ ခေါင်းနား ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ်နားကနေ ကိုင်ပြီး အသာအယာ ဖယ်ရှားပါ။ စိတ်အေးအေးထားပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဂရုတစိုက် ဖယ်ရှားပါ။ မွှားတကောင်လုံးကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အဆိုပါမွှားကို အမြန်ဆုံး သုတ်သင်ပိုက်ပြီး အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပေး/လိမ်းပေးပါ။
Lyme disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lyme-
disease/basics/definition/con-20019701. Accessed July 5, 2017.
Lyme disease 10 times more common than thought.
http://www.health.harvard.edu/blog/lyme-disease- 10-times- more-common- than-
thought-201308206621. Accessed July 5, 2017.
Lyme Disease: What To Know This Season. http://www.webmd.com/rheumatoid-
arthritis/arthritis-lyme- disease?page=1#1. Accessed July 5, 2017.